कांग्रेसको सभापति डा. शेखरलाई किन बनाउने ? « Nepal Bahas
अबको कांग्रेस विदेशीको ईसारामा हैन नेपाली जनताको भावना र चाहनामा चल्ने दृढता : डा. शेखर कोइराला
प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १६:५०
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला राजनीतिक बृत्तमा अहिले अत्यन्तै चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । उनि कांग्रेसभित्र एक अब्बल दर्जाको संगठनकर्ताको रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् भने चिकित्सा क्षेत्रमा समेत उनको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा सर्बविदितै छ । जिवनको लामो समय देशबासीको सेवामा बिताएका उनि अहिले नेपाली नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै कांग्रेसलाई सवल र सक्षम बनाउन अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
नेपाली जनताका बिभिन्न खालका समस्याहरुमा अत्यन्तै नजिक रहने डा. शेखर नेपाली जनताका पिरमार्का र अप्ठ्याराहरुमा सहयात्रीको भुमिका निभाउदै आएका उनि राजनीतिलाई नितान्त सेवा र समर्पणको धारवाट अगाडि बढाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । जनताका दु: ख र समस्याहरुमा गाउँ–घरमै गएर घाउमा मल्हमपट्टी गरिरहेका कोइरालाले राजनीति ब्यक्तिगत लाभका लागि नभई जनताका समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।
बिगतमा विश्वभरी फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीको समयमा नेपाली कांग्रेसका तमाम नेताहरु घरमै लुकेर ज्यान जोगाउने ध्याउन्नमा लागिरहेका बेलामा समेत आफ्नो ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी डा.कोइरालाले जनताका घर-घरमा गएर बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र जनताका साथमा बसेर रोगसँग लडने साहस र हिम्मत प्रदान गरिरहेका देखिन्थे ।
वास्ववमै देशको नेता भनेको त्यो हो जसले जनताको भावना बुझेर जनताका पक्षमा सधैं आफुलाई उभ्याउने प्रयत्न गर्छ, त्यो शाहस र हिम्मत अहिले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालामा देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताको सुख दु:खमा सरिक हुने नेपालको एकमात्र जिउँदो नेता भनेकै डा. शेखर हुन ।
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आफुलाई होमिरहे पनि कुनै पनि दल बिशेषको पक्षपोषण नगरी सिंगो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संभवत विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायाण निधी, शुशिल कोईराला र गिरिजाबाबु पछिका एकमात्र नेता हुन डा। शेखर कोइराला जसले सिंगो देश बनाउने सपना, त्यो सपनालाई पुरा गराउन सक्ने योजना, र ति योजनाहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने कार्यक्रमहरुको खाका कोरिसकेका छन् ।
त्यहि बिकासको भावी कार्यक्रमहरुका योजनाहरु बोकेर अहिले डा. शेखर सिंगो देश दौडाहामा हिडिरहेका छन् । जहाँ जहाँ कोइराला पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका मात्र हैन सिंगो नेपाली जनताको खुलेर साथ र समर्थन पाईरहेको देखिन्छ । जनताको त्यो अपार मायाँ र साथ देखेर डा. शेखर पनि देश निर्माणको महान अभियानमा जुटेका छन् डा. कोइराला भन्छन् – नेपाली जनताको मुहारमा मडारिएको कालो बादल हटाएर जनताको मुहारमा खुसी नल्याई अब म राजनीतिबाट बिश्राम लिन्न ।
नेपाली जनतालाई देशमा राजनीति के कसरी चलिरहेको छ, कस्ले सरकार बनायो कस्ले सरकार भत्कायो भन्दा पनि महङ्गी कस्ले नियन्त्रण गरिदेला ? भन्ने बढी चासो मैले पाएको भन्दै कोइरालाले अब नेपाली कांग्रेसको ध्यान त्यस तर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु बताएका छन् ।
देशलाई बिकासको गतिमा अग्रसर गराउन नेपाली कांग्रेसको आउँदो चौधौं महाधिबेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार घोषणा गरिसकेका नेता कोइरालाले आफ्नो भावी योजनाहरु र नागरिकहरुका समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने संभावित योजनाहरु र कार्यक्रमहरुका बिषयमा पार्टी पंङ्गती र कार्यकर्ता तहमा बहश र छलफल पनि चलाई रहेका छन् ।
शेखरले बर्तमान राजनीतिको बिश्लेषण गर्न र भावी राजनीतिको सहजै अनुमान गर्न सक्ने एक कुशल द्रष्टाको रुपमा समेत आफुलाई प्रमाणित गराई सकेका छन् । डा। शेखर भन्छन् अहिले देशको राजनैतिक परिस्थिति अत्यन्तै गम्भिर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । पार्टीभित्र मौलाएको चरम गुटबन्दी अन्त्य नभई नेपाली कांग्रेस कहिल्यै सवल पार्टी बन्नै सक्दैन । आजसम्म हामीले सत्ताको लागि मात्रै राजनीति गरेको भन्ने आम चर्चाको बिषय भएको बताउनु हुँदै कोइराला भन्छन् । पहिलो पुस्ताको त्याग, समर्पण, बलिदान र क्रियाशिलतालाई आफ्नो मार्गनिर्देशन बनाएर आगामी योजना बनाउनु नै हाम्रो एकमात्र लक्ष र उद्धेष्य हुनुपर्दछ ।
पहिलो पुस्ताको त्यो प्रकारको त्याग, बलिदान, निस्वार्थ भावना र समर्पणबाट अब पनि हामीले केहि कुरा नसिक्ने हो भने हामिले जनताको नेतृत्व गरेको कुनै अर्थ रहदैन । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नेताहरुको लक्ष र चाहना त्यो कुर्सीको लागि मात्रै अर्जुन दृष्टि भयो भने त्यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सृजना गर्ने बताउँछन् । त्यस्ता कुराले हाम्रो देश भित्र मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको क्रेडिटिबिलिटी पनि कमजोर हुदै जाने उनको भनाइ छ ।
“म गाउँमा जान्छु, जनताका भावना र चाहनाहरु बुझ्छु । जनताले ठूलो कुराको आशा गरेका छैनन् । अहिले देश महङ्गीको मारमा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गरिदेऊ भनिरहेका छन् । देशमा बलात्कार र हत्याका घटना बढीरहेका छन्, अपराधिहरुले सरकारकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाईरहेका छन्, आफ्नै देशका गाउँहरु असुरक्षित भैरहेका छन्, कम्तिमा राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदेओस भन्ने आशा राखेका छन् ।
गिरिजाबाबुको राजनीतिक सकृयता तर्फ ईंकित गर्दै डा. शेखर कोइरालाले भनेका छन् । म गिरिजाबाबु जस्तो ८४ बर्षको उमेरमा सडकमा पलेटी कसेर निरंकुसताको बिरुद्धमा लडेजस्तो लडन सक्ने बलियो छैन, गणेशमानजी जस्तो सिंगो मुलुक परिवर्तन गराउने आन्दोलनको सर्बोच्च कमाण्डर भै आन्दोलन हाँकन सक्ने बहादुर पनि छैन तर नागरिकका समस्या समाधान गर्न सक्ने खुबी र समाधान गर्न सक्ने योजना र कार्यक्रम अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमता र दक्षता भने म सँग छ ।
भ्रष्टाचारले जसरी चरमचुली पार गरिसकेको छ त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै शुन्य शहनशीलतामा पुर्याईदेउ मात्रै भनिरहेका छन् । गाउँ गाउँमा अपराधिकरण बढिरहेको छ, दण्ड हिनताको अन्त्य गरिदेउ मात्रै भनिरहेका छन् । हामीलाई ब्यवसाय गरेर नेपाल भित्रै बस्ने मन छ त्यो वातावरण मिलाई दिएर हामीलाई स्वदेशमै गरिखान देउ मात्रै भनिरहेका छन् । यत्ति पनि गर्न नसके किन राजनीति गर्नु ? केका लागि सत्ताको लुछाचुँडी गर्नु ?” कोइरालाले आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् ।
डा. शेखर भन्छन् अब मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यस तर्फ नै रहनेछ । जनताको ओठमा हाँसो नल्याई, जनताका हातमा कामको ग्यारेन्टी नगरी, जनताको शान्ति सुरक्षा नगरी, देशमा अमन चयन कायम नगरी अब कसैले अनुनय विनय गरे पनि म नेपाली जनताको स्तरउन्नति नगरि राजनीतिवाट पछि हटनेवाला छैन ।
डा. शेखरको भनाइ छ नितान्त ब्यक्तिगत फाईदाका लागि गरिने राजनीतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ त्यो गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौ, गरेर देखाउँछौ ।” चिप्ला र आश्वासनका पुलिन्दाले अब नेपाली जनताको पेट भरिनेवाला छैन, अब एक्सनमा गएर देखिने गरिको काम गर्न आवश्यक छ । त्यो काम गर्न किन पनि सजिलो छ भने अहिले नेपाली जनताको बिश्वास र भरोषा नेपाली काङ्ग्रेससँग रहेको छ । कोइरालाले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
वीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अबधारणालाई अहिले विश्वले अंगाली रहेको बताउँदै कोइरालाले भने, हामी अहिले त्यहि वीपीले देखाउनु भएको बाटोतर्फ अग्रसर भैरहेका छौं । यसलाई पूर्णता दिन र वीपीका सपना पुरा गराउन नेपाली कांग्रेसको चौधौ महाधिबेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने कुरामा आफु दृढ रुपमा बिस्वस्त रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वले वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजबादको बाटोलाई अंगिकार गरेर अघि बढने कुरामा विश्वस्त हुन आम नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्दै अबको कांग्रेस विदेशीको ईसारामा हैन नेपाली जनताको भावना र चाहनामा चल्ने दृढता समेत ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसभित्र अबको नेतृत्व युवाको, त्यसमा डा. शेखर सारथीको रुपमा हेर्न चाहेका छन् ।
अब कांग्रेसको ध्यान केन्द्रीय महाधिवेशनतर्फ !
बेहाल जनता : फस्टाउँदो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, सरकार मौन
एमाले महाधिवेशन : बकसमा पद पाउन युवा नेताहरुको लस्कर